Zidane Oo Hal Arin Oo Cajiib Ah Ka Codsaday Ciyaartoydiisa Ka Hor Kulanka Galabta Ee Eibar %
Real Madrid ayaa galabta waxay kula dheeli doontaa dhigeeda Eibar, gurigeeda kulan ciyaareed ka tirsan La Liga, waxaana ciyaartaan Los Blancos, ay utahay mid aad muhiim u ah, laakiin ay ku adag tahay inay si fudud ay kusoo badiyeen.
Zidane, maamulaha Los Blancos, kaasoo wariyaasha uwaramay ka hor Dheeshaan ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in ciyaartoydiisa looga baahan yahay in aysan dhayelsan kooxda ay ubaxayaan ayna udheelaan sida ugu wanaagsan.
“Waxaan filaynaa ciyaar kale oo adag, kaasoo horyaalka ka tirsan, garoonkana waa mid aad u adag oo dhib badan,” ayuu macalinkaan reer France yiri.
“Waa ay adag tahay in la dhalino goolal, sababtoo ah, maxaa yeelay waxay ku jiraan [Eibar] sanad ciyaareed fiican, waana inaan helnaa bandhigeena ugu fiican si aan uguuleysano.
“Waxaa jira waqtiyo ay adag kugu adag tahay sanadka oo dhan, heer kasta oo aad joogto – Sanad ciyaareedkan, horyaalku waxaan la kulanay dhibaatooyin badan, waana mar aan kor-usocono iyo mar aan kufaynay,” ayuu sii daba dhigay.
“Marka aad aragto farqiga weyn oo udhaxeeya adiga iyo kuwa kaalinta koowaad ku jira, waa ay nagu adag tahay maskax ahaan,” ayuu qiray.
“Fariinteyda, ku wajahan ciyaartoyda waa in aanan hoos udhigin hubkeena,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Mucalimuu Zidane.
Sikastaba, ciyaarta Real Madrid iyo Eibar, taasoo maanta ka bilaaban doonta garoonka Estadio Ipurua, 15:00 oo Galabnimo ayaa hadii uu ALLE raali ka noqdo Natiijada kasoo baxda waxaad kala socon doontaan Laacib.so.